Xaraf Alifka kasoo xumaadey Albaqra kama tooso Mudnayaal. | Jamaame News Network
Madaxweynaha Mudane farmaajo iyo Raiisulwasaare Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Guddoomiyaha golaha Sharci dejinta Mudane Jawaari, kuwaasi oo ka woda tashadey soo dhisidda wasaaradaha cusub.
Dhaliil waa dhaqan inoo noqdey hiddo lagama gudbaan ah, saa darteed, mudanayaalow, meeshaan waxaa igaaga muuqdo, dhaliil soo socodo ee ah, war meeye, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, oo ah, guddoomiyaha golaha sare?
Mase dhicidoontaa in ay berrito timaado, inay golaha sare yiraahdaan, annagu guddoomiyaheenna waa uu ka maqnaa meesha, oo lama tixgelin? Mise sida tan dastuurka qabyo qoraalka ah, ayaa dhigaayo, inay dhisitaanka wasiirrada ay keli ka woda tashan karaan seddaxdaan xubin?
Hadduusan jirin qodob taasi reebaayo, amase caddeynaayo, waxaan jeclaan lahaa, in arrintaasi aysan inoogu noqon berrito, xarafkii Alifka kasoo xumaadey ee Albaqra ka toosi waayey.
Aan u gudbo, arrin aad loogu riyaaqey ee uu madaxweynaha ka dhawaajiyey, sida wararku sheegayaan, oo ah, in wasiirrada aan marna laga soo xulin xildhibaannada labada aqal, taasi waa mid caddeyneyso inuu qof walbo oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay inuu dalkiisa wax u qabto.
Taasi oo ka dhigan, Hooyooyinka Soomaaliyeed ma dhaliwaaynin, qof jago qabto, ee waa inuusan jiraan qof labo jago, isku qabto , iskaba daa, mid seddax iyo afar jago, qabto, kaasi oo ka dhigan inuu qof kale jagadiisa u diidey, amase dhigey jago la’aan, taa oo u dhiganto, intaa oo qoys, inuu qofkaasi dhigaayo wax la’aan, halka haddii uu qof walbo hal jago ku ekeysto, ay qoysas fara badan ay nolol ka helayaan, iyo caafimaad iyo wax barasho.
Mudanayaal, waa inuusan qofka qaban hal jago ka badan , si ay umadda inteeda badan ay u woda helaan nolol ku filan , amase u woda noqdaan kuwa ay ka hadhey kurbo shaqo la’aaneed.
Aan u tillaabo, arrin aad u yaab leh, oo aad mooddid inay dalkaani ceeji ku dig siiso mar walbo, oo ah, hawlahii umadda ka woda dhaxeysey, oo noqotey, mid ay keli dad yer, amase beel iyo labo, ay u arkaan inay ayagu keli ay xaq u leeyihiin, aysan qabinba inay umadda Soomaaliyeed oo idil dalkaani uu ka woda dhaxeeyo.
Taasi oo ah, qofkii dalkaani jago u qabto, inuu yahay qof Soomaali ah, isla markaana gudanaayo waajibkii ka saarnaa dalkaani, hase yeeshee taasi waxaan weli rumeysneyn kuwa maskaxdooda ay ka dhaadhacsantahay inay ayagu keli leeyihiin.
Haddaba mudanayaal maanta seeftii cadaaladda gacantiinna ayay ku jirtaa, ee xaqa u kala soora umadda, marna ha u jalleecina, odeyda iyo caada qaatayaalka ku woda naaxay, dagaal oogista, iyo burburinta dalka, iyo dilka dhallintii dalka dhisi lahaa, kuwaasi oo iska dhigey, wakiillo ilaahay uu usoo direy inay umaddaani ayaga u haayaan nolosha.
Dalka waxaad u doortaan kuwa dadka, dalka, diinta iyo danta umadda u shaqeynaayo, hana u fiiranina, reer hebel iyo reer hebel , iyo degmo hebla, iyo meel hebla.
U fiiriya, qofkaani umaddaani ma badbaadinkaraa ,diinta, dalka iyo danta guud ma dhowri karaa, meel kastoo uu kasoo jeedo.
Arrintuna yaysan noqon, beel heblaa carooneysa, iyo beel heblaa, xaq u leh.. ogaada xaq waxaa iska leh, kan badbaadinkara afarta”D”(Diinta, Dadka, Dalka, iyo Danta Guud), meeshuu doono ha ku dhasho, keli waxaa shardi ah inuu Soomaali yahay, una dhiminaayo , loona dilaayo Soomaalinimadiisa.
Ogaada mar walbo “QARAN IYO QABIIL INAYSAN MEEL WODA GELEYNIN”.
Arrintuna yaysan noqon Xarafkii ALifka ka xumaadey ee Albaqra katoosiwaayey.